लोक्कल सर्चका लागि एनलोकेट - ह्याप्पी एनलोकेटिङ
Aakar March 11, 2015
केही कुराको खोजी गर्नुपर्यो भन्ने लाग्ना साथ हामी गुगललाई सम्झन्छौँ । वेबमा खोजि गरिएको कुरा, मिलिसेकन्डमा खोजेर गुगलले हामीलाई नतिजा देखाइदिन्छ । तर जब हामी लोक्कल सर्चको कुरा गर्छौँ, नेपालमा हाम्रो वरिपरि भएका कुराहरुको बारेमा जान्न खोज्छौँ, त्यसबेला हामीले चित्त बुझ्दो नतिजा भेट्दैनौँ ।
कुनै बैंक कहाँनेर छ भनेर गुगललाई सोधे भनेँ, गुगलले मलाई उक्त बैंकको ठेगाना दिनसक्ला, म्यापमा बाटो पनि देखाइदिनसक्ला तर त्यही बैंकको एटिएम कता छ भनेर खोज्यो भने, गुगलले बताउन सक्दैन। त्यसो त आफ्नो ठाउँ वरपर, पेट्रोल पम्प कहाँछ भनेर सोध्यो भने पनि गुगल नाजवाफ हुन्छ । गुगललाई नेपालको हस्पिटल, मुभि थिएटरको बारेमा जानकारी त होला तर हस्पिटलका डाक्टरहरु अनि चलिरहेको फिल्महरुबारे हालसम्म जानकारी छैन। भन्नको मतलब, गुगलमा खोजी गर्दा हाम्रा वरिपरि भएका, हामीलाई दैनिक जिवनमा चाहिने कुराहरु भेट्न कठिन छ । यस्तै लोक्कल समस्याहरुको समाधान गर्न एनलोकेट लागि परेकोछ ।
एटिएम खोज्नुपर्यो ? - एनलोकेट गर्नुस् ।
पेट्रोल पम्प ? - एनलोकेट गर्नुस् ।
हस्पिटल / डाक्टर / एम्बुलेन्स ? - एनलोकेट गर्नुस् ।
फिल्म / नाटक ? - एनलोकेट गर्नुस् ।
खाने ठाउँ ? - एनलोकेट गर्नुस् ।
स्कुल / कलेज ? - एनलोकेट गर्नुस् ।
सरकारी कार्यालय ? - एनलोकेट गर्नुस् ।
प्रहरी ? - एनलोकेट गर्नुस् ।
एनलोकेट के - के को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लेख्दै गयो भने लिस्ट लामो हुनजान्छ । अहिलेलाई एनलोकेटलाई लोकल सर्च इन्जिन भनेर बुझ्दा हुन्छ जहाँ तपाईले, आफूलाई चाहिएका कुराहरु एनलोेकेट वेब एप वा मोबाइल एपमा खोज्नसक्नुहुन्छ ।
एनलोकेट केही वर्ष पहिले नै सुरुभएको थियो मोबाइल एपको रुपमा र केही वर्ष त्यसै अवस्थामा रह्यो । अघिल्लो वर्षमात्रै एनलोकेटले पुनर्जिवन पायो, नयाँ सुधारिएको मोबाइल एप र वेप एप मार्फत । एनलोेकेटमा लोक्कल बिजनेस / डेटा थपिने क्रम जारी छ र प्रयोगकर्ताहरुको 'एक्सपिरियन्स' दिनहुँ सुधारिने क्रममा छ । त्यसो त तपाईको आफ्नो व्यवसाय / सेवा पनि आफैँले एनलोकेटमा राख्न मिल्छ, अनलाइनमा व्यवसाय राख्दा हुने फाइदा मैले बताइरहन नपर्ला ।
Read:7Must Have Nepali Android Apps
प्राय: एटिएम खोज्न मात्र प्रयोग गर्ने गरेको एनलोकेटमा हिजोआज अन्य सेवाहरुको लागि प्रयोग गर्न थालेको छु। केही कुरा खोज्नुपर्दा गुगल चलाएझैँ, एनलोकेट एउटा शैली बन्दैछ । सबैभन्दा रोचक चाँही, हस्पिटल/डाक्टर खोज्दा, कुन डाक्टर कुन हस्पिटलमा कति बजेसम्म हुन्छन् भन्ने कुरा एकैठाउँमा देख्न पाइयो, यसले समयको बचत मात्रै भएन, आफ्नो अनुकुलको समयमा आफ्नो अनुकुल हस्पिटलमा जान सकियो । एनलोेकेट ब्लगबाट उदाहरण साभार गरेकोछु।
यहाँ सोधिएकै प्रश्नका उत्तरहरु मैले एनलोेकेटमा खोजिहेरेँ । एनलोकेटले भनेजस्तै सबैकुरा एकै ठाउँमा सरलिकृत रुपमा ल्याएर देखाइदियो ।
पूल्चोक, हरिहरभवनमा बसेर अर्थोपेडिक्स भनेर खोज्दा सबैभन्दा नजिकका हस्पिटलहरु देखियो । हस्पिटलमात्र होइन, कुन डाक्टर कतिबजे कहाँ हुन्छन् भन्ने पनि एकै ठाउँमा देखियो । एनलोकेटको उपयोगिताबारेको यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो । हुन त एनलोकेट आफैँमा पूर्ण भइसकेको छैन, दिनहुँ नयाँ डेटाहरु थपिइरहेकाछन् तर यत्ति हो, प्रयोगकर्ताले चाँही सरल ढंगले खोजेका कुराहरु पाउँछन् ।
गर्ने हैन त एनलोकेट?
➤ Install nLocate on Android | iOS
आकार पोष्ट गुगल प्ले न्युजस्ट्यान्ड (एन्ड्रोइड / आइओएस) र एप्सझोला (एन्ड्रोइड एप) मा उपलब्ध छ।